Ifulethi lase-Berlin - I-Airbnb
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sviatoslav
U-Sviatoslav Ungumbungazi ovelele
Kubo bonke abahamba noma abasebenza, intengo ihlala ifana njengaphambi kwempi!
Njengoba ungumuntu ophoqelekile futhi ungakwazi ukukhokha inani eligcwele, sizokunikeza isaphulelo esifika ku- -25% !!
Ungasekela abantu base-Italy ngokubhukha amafulethi ethu. Sizowanikeza mahhala kulezi zinsuku kubabaleki!
Ifulethi lethu livame ukuqhathaniswa namafulethi ase-Berlin ngesitayela, okuqukethwe nomoya. Ifulethi lase-Berlin liyinhlanganisela yomoya wendlu endala ye-Lviv, izinto zikagesi zesimanje, imininingwane yangaphakathi ethakazelisayo kanye nomklamo omncane.
Kukhona konke ukuhlala kwakho okunethezekile nokuphumula. Le ndawo ilungele abantu abashadile, abahamba bodwa, abahamba ngebhizinisi kanye nabo bonke abafuna ukujwayelana nelinye lamadolobha amahle kakhulu e-Ukraine.
4.90 · 153 okushiwo abanye
Kungaba imbangela yawo wonke umuntu eduze nalapho kunamathilomu amaningi, ama-pub, amamyuziyamu kanye nepaki elikhulu kunawo wonke edolobheni - Lviv High Castle. Futhi eduze nefulethi kuyimakethe enemikhiqizo yendawo kanye nezitolo ezinkulu ze- "Silpo".
Kungakhathaliseki ukuthi yini ongayibona efulethini ukuthi uyisebenzise. Uma ungatholi okuthile, sicela ushayele ucingo bese ubuza. Sizojabula ukukusiza!
USviatoslav Ungumbungazi ovelele